15ka Maamule ee ugu mushaarka badan ee aan faa'iido doonka ahayn 2022 - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn 15ka Maamule ee ugu mushaarka badan ee aan faa'iido doonka ahayn 2022
isha image: boardeffect
Shaqooyinka qaarkood waxay ku helaan wax ka badan inta aad qiyaasi karto suurtogalnimada, mid ka mid ah kuwan oo kale waxay noqon doontaa mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn.
Booskani wuxuu ku siinayaa waxyaabo iyo mudnaanta aan ahayn bixinta caadiga ah ee ay heli karaan kuwa kale ee jagooyinka la midka ah marka laga reebo kuwa laga heli karo shirkadaha teknoolajiyada.
Maqaalkani waxa uu sahamiyaa arrinta aan faa'iido doonka ahayn, mawduucyada ku xeeran faa'iido darrada, iyo maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn ee ugu mushaharka badan.
Maxay qabtaan Maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn?
Shaqada maamulaha guud ee qaar ka mid ah ururadan aan faa'iido doonka ahayn waxay ku lug leeyihiin wax badan oo ka mid ah samaynta go'aamada ugu qiimaha badan ee ka dhigaya kuwa aan faa'iido doonka ahayn ganacsiga ama ka saarista ganacsiga. Maamulaha guud ayaa go'aaminaya sida lacagta loo sameeyo iyo waxa ku dhacaya lacagtan ka dib marka la sameeyo.
Si kasta oo ay u fududaato shaqada maamulaha guud ee hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn, ma aha heshiis fudud. Hadii madaxdani maamuli lahaayeen hay’ado macaash doon ah shaqadu si cadaalad ah ayey u fududaan lahayd sidaad ka warqabto in shaqadaadu tahay inaad shirkada iyo saamilaydeeda lacag u samayso, aduunkan aynu hadda ku noolnahayna waa tan. si cadaalad ah u fududahay in la sameeyo in ka badan isku dayaan in ay lacag sameeyaan oo aad isku daydo in aadan lacag samayn waqti isku mid ah.
Caqli-xumada dhabta ah ee xaaladdu waxay ka dhigaysaa mid aad u kacsan jidkeeda. Hay'adaha samafalka waxaa lagu maalgeliyaa habab kala duwan taas ayaana go'aamisa inta ay le'eg tahay mushaharka madaxda sare. Tani waxay la macno noqon kartaa in maamulaha guud uu helo lacago xad-dhaaf ah, mid kalena la siiyo mushaarka caadiga ah.
Eeg Sida aad u Degdeg ah ugu Noqon karto Maamule Sare halkan.
Maxay yihiin Ururada aan macaash doonka ahayn?
Ururada aan faa'iido doonka ahayn ama ururada aan faa'iido doonka ahayn waa ururo ganacsigooda u wata si aysan faa'iido ugu helin milkiilayaashooda. Halkii ay lacag ka heli lahaayeen milkiilayaashooda, kuwa aan faa'iido doonka ahayn waxay helaan lacag waxayna ku deeqaan si ay u gaaraan ujeedooyinka, ujeedooyinka, iyo yoolalka ururka.
Mararka qaarkood, ama marar badan, ujeeddooyinkani waa kuwo aad u sarreeya oo aan lagu gaarin hal maalin ama hal sano, laakiin ay tahay inay qaataan wakhti si ay u gaaraan. Ujeeddooyinkan waxaa ka mid noqon kara horumarinta tayada nolosha dadka kale heer maxalli, bulsho, gobol, iyo heer caalami. Ururadani maaha kuwo u heellan dano gaar ah ama dhaqaale balse waxay u taagan yihiin horumarinta danta guud.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya kuwa aan faa'iido doonka ahayn iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn waa in ururada macaash-doonka ah, dakhligan xad-dhaafka ah (faa'iidooyinka) sida caadiga ah waxaa loo qaybin doonaa saamilayda. Ururada aan faa'iido doonka ahayn, dib ayaa loo maalgeliyaa ururka haddii ay noqoto shaqaaleysiinta shaqaale dheeraad ah, dhisidda kaabayaasha, iwm.
Sideed Lacag u Samaynaysaa Haddi aad leedahay Urur aan faa'iido doon ahayn?
Ururka aan faa'iido doonka ahayn wuxuu u ururin karaa dhaqaale siyaabo kala duwan iyadoo ku xiran mawduuca uu u dagaalamayo. Haddii aad maamusho urur aan faa'iido doon ahayn, waa inaad si aad ah uga taxadartaa inaad lacag u ururiso sababta saxda ah oo aad uga faa'iidaysato.
Waxaa jira farsamooyin kala duwan oo dhaqaale lagu ururiyo, oo ay ku jiraan:
Lahaanshaha joogitaanka online ee ururkaaga waxay muhiim u tahay kor u qaadista wacyiga iyo ururinta lacagaha. Websaydhkaaga ayaa kaa caawin kara kor u qaadida dakhliga iyada oo loo marayo habab kala duwan, sida goobo badan oo lacag ururin ah. Goobaha lacag ururinta sida Kiva, iyo Milaap ayaa ah tusaalayaal aad u fiican.
Sanduuqyada deeqaha waxaa la dhigi karaa dukaamo badan oo waaweyn ama dukaamada raashinka ee ay macaamiishu ku badan yihiin.
Dhaqaale Ururinta Bulshada
Waxaad abaabuli kartaa lacag ururin bulsho. Marti qaad dhammaan dadka muhiimka u ah qadiyadaada, iyo sidoo kale deeq-bixiyeyaasha mustaqbalka.
Shirkaduhu waxay noqon karaan ilo dhaqaale oo qiimo leh. Waxaa laga yaabaa inaad had iyo jeer u soo jeediso fikradahaaga aan faa'iido doonka ahayn shirkadaha, iyo haddii ay xiisaynayaan, way maalgelin doonaan.
Dalka Mareykanka, inta badan ururada aan macaash doonka ahayn ayaa asal ahaan maamula laba shirkadood isku mar. Mid ayaa laga yaabaa inuu bixiyo adeegyo macmiil ama uu ka shaqeeyo inuu beddelo siyaasadaha (ama bulshada guud ahaan). Midda kale waxay mas'uul ka tahay ururinta dhaqaalaha si loogu bixiyo shaqada.
Tani waa mid ka mid ah sababaha ay u adag tahay in maamule guud ahaan u maamulo hay'ad aan faa'iido doon ahayn. Dadka ka faa'iidaysanaya shaqadaada iyo dadka lacagta ku bixinayaa way kala duwanaan karaan! Tani waa sababta xiriirka ka dhex jira urur aan faa'iido doon ahayn uu aad muhiim ugu yahay.
Inta aysan dadku bixin, waa in ay bartaan ururkaaga, sida waxa uu qabto, oo ay kugu aaminaan lacagtooda, haddii aysan bixinna, waa in aad albaabbadaada xirtaa.
15ka Maamule ee ugu mushaarka badan ee aan faa'iido doonka ahayn
Waa kuwan maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn iyo kuwa samafalka ah ee ugu mushaarka badan:
Chris Darby waxa uu shaqadiisa ka bilaabay Northern Telecom (hadda Nortel Networks) iyo Bell Northern Research. Mr. Darby wuxuu ahaa madaxweynaha iyo maamulaha Sarvega, isku xidhka XML ee ay taageerto hawl gal, iyo bixiyaha xalinta amniga. Mr. Darby waxa uu ahaa Gudoomiyaha iyo Maamulaha Guud ee Stake, oo ah ganacsi latalin amni oo caan ah oo internet ka ah oo ay aakhirkii iibsatay Symantec, ka hor inta aanu ku biirin Sarvega (SYMC).
Mr. Darby waxa uu hore u hogaamiyay Qaybta Alaabada Dhexe ee Intel isaga oo Madaxweyne ku xigeen iyo Maamule Guud ka ahaa waxaanu masuul ka ahaa qaybta Software-ka Infrastructure Software, oo ay ku jiraan il furan iyo software ganacsi labadaba. Markii uu la wareegay Sarvega Inc., wuxuu ku biiray Intel Ogosto 2005.
Mr. Chris Darby waa madaxweynaha iyo maamulaha guud ee In-Q-Tel, ganacsi maalgashi istiraatijiyadeed oo madax banaan oo raadiya tignoolajiyada horumarsan si ay u caawiso CIA-da iyo yoolalka Bulshada Sirdoonka.
Darby waxa uu hela ku dhawaad ​​$2,222,343 sanad walba, isaga oo ah mid ka mid ah maamulayaasha aan macaash doonka ahayn ee ugu mushaharka badan oo leh mushahar sal ah $769,620.
Maryan waa sarkaalka ugu sareeya ee Mather Lifeways, Hormuud bixiyaha barnaamijyada aan faa'iido doonka ahayn ee bulshooyinka waayeelka ah iyo barnaamijyada bulshada, iyo sidoo kale isha la ixtiraamo ee cilmi-baarista iyo waxbarashada xirfadlayaasha warshado badan iyo daryeel-bixiyeyaasha macluumaadka iyo aqoonta kor u qaada nolosha dadka waaweyn si ay si fiican u gabowsan kartaa.
Maryan waxay heshaa, sanadkii, 2,222,343, iyo $769,620 sida mushaharka aasaasiga ah.
Kasbashada guud ahaan $2,298,047 iyo gunnada aasaasiga ah ee $962,345 sanadkii waa Alan List, Agaasimaha Caafimaadka ee Xarunta Kansarka Moffitt, xarun cilmi baaris oo ku taal Tampa, FL, kuwaas oo hadafkoodu yahay ka qayb qaadashada ka hortagga iyo daaweynta kansarka. Xarunta waxaa sidoo kale loo yaqaanaa H Lee Moffitt Cancer Center oo loogu talagalay kuwa si fiican u yaqaan magaca.
Xaruntu waxay caan ku tahay sayniska aasaasiga ah iyo sidoo kale ka hortagga iyo xakamaynta kansarka, sayniska tarjumaadda, baadhitaanada bukaan-socodka iyo bukaan-socodka, iyo bixinta maaraynta iyo adeegyada kale ee taageerada sida xubinta kaliya ee shirkadda iyo waalidka ee lammaanaha shirkadaha hoosaadyada.
Isaga oo ah madaxweynaha iyo maamulaha guud ee ISO New England, oo ah shirkad maamusha xadhkaha korantada iyo dhibaatooyinka kale ee korantada ee dabeecaddaas, Gordon oo ah mid ka mid ah madaxda sare ee ugu mushaharka badan ee aan macaash doonka ahayn ayaa isu arka in uu helo $2,306,029, iyo $760,091 gundhig ahaan dhammaadka sannad kasta.
Hal qayb oo ka mid ah ISO New England Inc. waa urur aan faa'iido doon ahayn oo ay oggolaatay dawladda federaalku in ay qabato dhammaan saddexda hawlood ee muhiimka ah si loo hubiyo in la isku halleyn karo oo waarta ee bixinta korantada ee dhammaan New England.
Dhaqdhaqaaqa ugu horreeya, Maamulka Tamarta, ISO-NE wuxuu xaqiijiyaa helitaanka joogtada ah ee korontadu qiimaha jaban ee 14.8 milyan ee degan gobolka iyada oo naqshadeynaysa, sifeynaysa, oo maamulaysa suuqyada gobolka ee suuqyada korontada iyo hubinta in suuqyadani yihiin kuwo cadaalad ah oo tartan ah.
Dhaqdhaqaaqa labaad, waxay xaqiijinayaan hawl-maalmeedka la isku halayn karo ee nidaamka gudbinta tamarta sare ee gobolka, waxayna saadaaliyaan oo ay jadwaleeyaan korontada gobolka looga baahan yahay ilbiriqsi kasta oo maalin kasta ah, waxayna hubinayaan in la helo koronto ku filan oo daboolaya baahida iyo agabka loo baahan yahay si loo ilaaliyo shuruudaha la isku halleyn karo oo ah hawl saddexaad.
Dakhligu waa $76.4m, Edward Grefenstette oo ka tirsan Hay'adda Dietrich Foundation waa 11 ka ugu mushaharka badan maamulaha aan macaash doonka ahayn ee liiska ku jira. Mu'asasada Dietrich waxay gacan ka geysataa waxbarashada sare ee aagga weyn ee Pittsburgh iyadoo siinaysa taageero dhaqaale lix machad oo waxbarasho.
Bishii Maajo 2019, Mu'asasada ayaa qaybinteeda sannadlaha ah u qaybisay hay'adaha ay taageerto oo la mid ah 3.0% hantida saafiga ah sida la xisaabiyay Janaayo 1, 2018. Edward Grefenstette wuxuu haystaa lacag guri-qaadasho ah $2,315,041 iyo gunno ah $540,000 shaqadiisa Madaxweynaha Hay'adda Dietrich Foundation.
Lisa oo ku jirta profile-keeda LinkedIn ayaa lagu dhawaaqay "Anigoo ah C-Suite fulinta oo leh 35 sano oo waayo-aragnimo kala duwan ah oo ku saabsan isbeddelka dhijitaalka ah, qorshaynta istaraatiijiyadeed iyo ganacsiga, dakhli-abuurka, suuq-geynta iyo raasamaal aadanaha ee qaar ka mid ah ururada ugu caansan adduunka, hadda waxaan haystaa shaqada ugu fiican meeraha - Madaxweyne iyo Maamulaha Guud ee Golaha Ad. Sida Madaxweyne iyo Madaxa Fulinta
Sida maamulka iyo agaasimaha faneedka ee Jazz ee Xarunta Lincoln, Wynton Marsalis waa mid ka mid ah maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn ee ugu mushaarka badan. Jazz ee Xarunta Lincoln waxay leedahay barnaamijyo waxbarasho iyo wacyigelin ay ka mid yihiin tartanka kooxda dugsiga sare ee sannadlaha ah iyo iid, akadeemiyada agaasimaha kooxda, manhajka mahadnaqa Jazz ee carruurta iyo dadka waaweyn, ardayda iyo qoyska riwaayadaha, dugsiga dhexe, iyo dugsiga sare Jazz akadeemiyada, xagaaga barnaamijyada dhalinyarada, seminaaro ardayda iyo waxbarashada, iyo sidoo kale caruurnimada hore iyo koorsooyinka waxbarashada dadka waaweyn iyo khayraadka kale ee waxbarashada music.
Laga bilaabo Maarso ilaa dhamaadka sanad xisaabeedka, Jazz ee qolalka riwaayadaha ee Xarunta Lincoln waa laga xiray dadweynaha sababo la xiriira shuruudaha gobolka iyo kuwa maxalliga ah ee falcelinta faafitaanka COVID 19. Xiritaannada loo baahan yahay awgeed, dhowr barnaamij oo waxbarid ah oo JALC ah ayaa loo raray onlayn.
Marsalis waxay heshay $2,361,171 dakhli ahaan iyo magdhow ahaan maamulaha maamulka ee xarunta.
David Myers wuxuu u adeegaa sidii Xubin ka mid ah Guddiga iyo Madaxweynaha iyo Madaxa Fulinta ee Ururka Machadyada Mareykanka ee Cilmi-baarista ee Sayniska Dhaqanka waxaana uu helay magdhow ahaan $2,430, 374.
Waxay abuurtay oo ay geysay barnaamijyo qiimayn garo ah iyadoo lala kaashanayo gobolada iyo degmooyinka si loo bixiyo macluumaadka kobaca ardayga. Hindisaha waxa lagu daray tirokoobyo, teknoloji, iyo agab isku toosan oo k-12 qaabaysan, soo koobid, iyo adeegyo iyo adeegyo dheeri ah, kuwaas oo inta badan lagu bixiyo intarneedka (oo u socota sidii la qorsheeyay o).
Qaybtu waxay kaloo eegtay isku halaynta imtixaannada ay qaadaan hay'adaha waxbarashada federaalka, gobolka, iyo deegaanka. Xogta iyo falanqaynta ayaa siisay awoodda dugsiyada iyo ururada kormeerka waxbarashada si ay u qiimeeyaan u hoggaansanaanta heerarka iyo sharciyada waxbarashada federaalka iyo gobolka.
Kasbashada $2, 517, 493 sida Madaxa Fulinta iyo Xubinta Guddida ee Ururka Wadnaha ee Maraykanka waa Nancy Brown. Ururka Wadnaha ee Maraykanka ayaa bixiya maalgelin loogu talagalay cilmi-baarista sababaha, ka-hortagga, iyo daaweynta cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Ururku wuxuu ku maalgeliyay in ka badan 4.6 bilyan cilmi-baarista tan iyo markii la aasaasay 1924, iyaga oo ka dhigaya kuwa ugu weyn ee gaarka loo leeyahay, maalgeliyaha aan faa'iido doonka ahayn ee cilmi-baarista wadnaha iyo xididdada maskaxda.
Kharashka cilmi-baadhistu waxa uu ku xisaabtamay 140,080,154 dollars sanad xisaabeedka 2019-20 ama 17% ee barnaamijka guud iyo kharashka adeega taageerada. -Deeqaha cilmi-baadhistu waxay dhammaatay 120,697,947 sanadka gudihiisa.
Michael Howard waa madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee ururka Machadka Daraasaadka Korantada Korontada. Hadafka EPRI waa in lagu sameeyo cilmi baaris iyo horumarin iyada oo loo marayo sayniska iyo tignoolajiyada si loo caawiyo macaamiisha xubnaheeda iyo dadweynaha guud ee Mareykanka.
Si loo gaaro yoolkan, EPRI waxay abuurtaa oo maamushaa cilmi-baaris iyo dadaallo horumarineed oo loogu talagalay kor u qaadista tamarta, qaybinta, iyo isticmaalka.
Kharashyada adeegyada barnaamijka waxaa si toos ah loogu dallacaa barnaamijyada cilmi-baarista sababtoo ah EPRI ma kala soocdo kharashyada dadban ee ujeedooyinka xisaabinta maaliyadeed, waxay ku jiraan qaybta maamulka iyo kharashka guud. Michael Howard waxa uu qaataa $2.
Thomas Campbell ee Matxafka Farshaxanka ee Metropolitan wuxuu u shaqeeyaa sida Agaasimaha Fulinta oo hela $3, 017, 012. Matxafka Farshaxanka Magaalo-madaxda Ujeedkiisu waa in uu helo, ilaaliyo, cilmi baadhisyo, bandhigo, iyo kor u qaado qadarinta shaqooyinka fanka oo si wada jir ah u metelaya baaxadda ugu weyn ee horumarka bini'aadamka ee heerka ugu sarreeya ee waxqabadka aadanaha. Thomas Campbell waa mid ka mid ah maamulayaasha ugu sarreeya ee aan macaash doonka ahayn
U shaqaynta Shirkadda Hawlgabka ee Ururka Maaraynta Magaalada Caalamiga ah Robert Schultze ayaa liiskan ku jira kaalinta afraad. Ururka Caalamiga ah ee Maareynta Maareynta Hawlgabka waxay u adeegtaa si ay u yarayso culayska dawladaha hoose iyo dawladaha hoose iyo wakaaladooda iyo qalabkooda iyadoo maamulaysa qorshooyinka hawlgabka magdhawga oo tayo leh oo dib loo dhigay, taas oo ka caawinaysa shaqaalaha waaxda dadwaynaha inay dhistaan ​​dammaanad hawlgab.
Waxa uu sannadkii qaataa $3, 125, 351 isagoo ah Madaxweyne iyo Madaxa Fulinta, iyo Agaasime.
Lewis von Thaer wuxuu u shaqeeyaa sida Madaxweynaha iyo Madaxa Fulinta ee Ururka Battelle Memorial Institute oo uu helo $3, 775, 540 magdhow ahaan sannadkii.
Machadka Battelle Memorial iyo la-hawlgalayaasheeda waxay wax ka qabtaan qaybaha muhiimka ah ee ajendaha cilmi-baarista sayniska ee qaranka, waxay sameeyaan cilmi-baaris cilmiyeed asaasi ah oo lagu dabaqo, horumarinta aqoonta sayniska iyo xalalka farsamada ee meelaha muhiimka ah ee sayniska, kordhinta helitaanka tamar nadiif ah oo badan, soo celinta iyo ilaalinta deegaanka ku hawlan hawlaha waxbarashada, iyo ka qayb qaadashada amniga qaranka iyada oo loo marayo hawlgalinta shaybaadhka qaranka.
Meeshan waa Tiffany Carr, oo u shaqeysa sida Madaxweynaha iyo Sarkaalka Sare ee Fulinta Isbahaysiga Florida ee Ka-hortagga Rabshadaha Guriga. Isbahaysiga Florida ee Ka-hortagga Rabshadaha Guriga (FCADV) waa urur loo sameeyay in uu gacan ka geysto abuurista adduun aan rabshad lahayn iyada oo la xoojinayo haweenka iyo carruurta iyada oo loo marayo ciribtirka rabshadaha shakhsi ahaaneed iyo kuwa hay'adaha iyo cadaadiska ka dhanka ah dadka oo dhan.
Tiffany Carr waxa ay heshaa $4 sanadkii.
Maamulaha guud ee aan macaash doonka ahayn ee ugu mushaharka badan waa James Skogsbergh oo ka tirsan Advocate Aurora Health. U doodaha Aurora Health, Inc. iyo kuwa raacsan (AAH) waa qayb ka mid ah nidaam daryeel caafimaad oo isku dhafan oo u adeega magaalooyinka Illinois, bari ee Wisconsin, iyo jasiiradda sare ee Michigan.
AAH waxay taageertaa bulshooyinka ay ku dhex shaqeeyaan iyagoo siinaya hawlo kala duwan oo la xiriira caafimaadka, waxbarashada, samafalka, cilmi baarista caafimaadka, iyo faa'iidooyinka kale. Daryeelka aasaasiga ah iyo kuwa gaarka ah, farmashiyeyaasha, daryeelka caafimaadka dabeecadda, daryeelka degdegga ah, baxnaaninta, daryeelka guriga, iyo daryeelka dhammaadka nolosha waa dhammaan tusaalooyinka adeegyada daryeelka caafimaadka.
James Skogsbergh waxa uu sannadkii qaataa $5, 964 isagoo ah Madaxa Fulinta, Guddoomiyaha guddiga, iyo Agaasimaha.
Maamulayaasha guud, agaasimayaasha fulinta, iyo maamulayaasha kale ee ugu sarreeya ee aan macaash doonka ahayn waxay sameeyaan ugu yaraan $900,000 sannadkii, iyaga oo mushahar ku leh tobanaan milyan oo isbitaallada waaweyn iyo nidaamyada caafimaadka.
Iyadoo maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn ee ugu mushaharka badan ay ka shaqeeyaan daryeelka caafimaadka iyo qaybaha maaliyadeed, ururada caadiga ah ayaa aad u xiiso badan.
Inkasta oo hay'ado kala duwani ay si qurux badan u magdhowaan hoggaankooda, maamulayaasha samafal ee ugu mushaharka badan waxay u muuqdaan inay noqdaan kooxo farshaxan, matxafyo, iyo machadyo cilmi-baaris.
Causeiq - Maamulayaasha aan faa'iido doonka ahayn ee ugu mushaarka badan
Erieri – 10 ka maamule ee ugu mushaharka badan hay'adaha aan macaash doonka ahayn
Isku dheelitirnaantamb – Sidee Hay’adaha Samafalku Lacag U Sameeyaan?
10ka Maamule Ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka
Shaqaalaha Bulshada ee Ugu Mushaharka Badan 2022 | 10 Xirfadaha ugu Fiican ee Shaqada Bulshada
16ka Agaasime ee ugu Mushaharka Badan Dunida | 2022
20ka Soosaar ee Muusiga ah ee ugu Mushaharsan Adduunka.
Sida Looga Sameeyo Lacag Kaash ah kaydka App-ka
Sida Dhakhso Loogu Dhisayo Credit 2021
Dadka intooda badan, go'aanka lagu wanaajinayo buundooyinkooda buundooyinka badanaa wuxuu yimaadaa marka ay isku diyaarinayaan inay codsadaan…
Xaaladaha ku habboon, dib -u -maalgelinta amaahda ardayga waxay keeni kartaa keydin weyn. Aan ku tuso sida ay…
Sida loo helo shatiga madadaalada 2022 | Hagaha Buuxa
Ganacsiyada, ururada, iyo shakhsiyaadka raba inay bixiyaan noocyada madadaalada waxay u baahan karaan shati ama oggolaansho kale…
Ololeyntu waxay had iyo jeer caawisay dadka u soo baxay doorashooyin siyaasadeed oo ka dhacay meelo kala duwan oo adduunka ah. Xirfadlayaashan ayaa ciyaara…
Sida Loo Qariyo Barnaamijyada aaladaha Samsung La cusboonaysiiyay | Hacks fudud
Nooca cusub ee taleefannada Samsung wuxuu la imanayaa astaamo xiiso leh oo xiiso leh iyo codsiyo dhif ah oo laga helo…